Qaar ka mid ah war Baahinta reer Gabiley oo sumcadi Djibouti iyo tii seedigood ku ciyaaray – Xeernews24
Qaar ka mid ah war Baahinta reer Gabiley oo sumcadi Djibouti iyo tii seedigood ku ciyaaray
Geelaha Jabuuti oo Ciidamadiisa ka aamin Baxey, Ehtiopiana qeylo dhaan u dirsadey.
Ciidamada Dalka Ethiopia ayaa saddexdii bishan ka gudbey soodinta ay Jabuuti dhanka Waqooyi-Bari kala wadaagto, sida u ku sheegey wageyska Africa Intelligence ee ka faalooda arrimaha siyaasada Afrikada Bari, cadadkiisii soo baxey 03-03-2017.
Wargeyska ayaa sido kale sheegey in ciidamadan ay Jabuuti ku soo galeen dalab ka yimi Madaxweynaha Dalka Jabuuti, Ismaacill Cumar Geele, isagoo ka cabsi qaba xasilooni darro ay abuuran Maleeshiyaadka Jabhada Qoomiyada Canfarta ee FRUD(Front pour la Restauration de l’unité et de la Démocratie). Wararka ka imanaaya Waqooyiga Jabuuti aya sheegeya in Jabhada FRUD in muddo ah dhaq-dhaqaaq milateri ka wadey halkaas.
Nabad gelyo xumada soo foodsaartey Wagooyiga Jabuuti ayaa sida wararku sheegayaan ka dhalatey muran dhul oo u dhexeeyay labada Qoomiyadeed ee Canfarta iyo Ciisa ee Sheegta in ay Jabuuti leeyahiin, waxaana Dalka oo dhan laga dareemayaa cabsi xoogan oo laga qabo in Jabhada FRUD dagaal balaadhan bilowdo, kabib markii ay guuldareysteen dedaalo la doonayey in muran dhuleedka lagu xaliyo. Dhulkan lagu muran sanahey ayaa Dhowaan Shirkad la laga leeyahey dalka Turkiya ka bilowdey sahamin la xidhidhiiga tamarta laga dhaliyo uumiga kulul ee biyaha oo aad ugu badan goobtaas. Farsamada uumiga kulul ee biyaha tamar loogu bedelo ayaa aduunka ku cusub waxaana arrinkaas hirgeliyo oo Keliya wadanka Island ee ku yaala Waqooyiga Qaarada Yurub. Khuburada tamarta ku xeeldheer ayaa sidoo kale sheegtay in hirgelinta farsamadaas aad ugu adkaan doonto Dawlada Jabuuti maadaama goobta la rabo in laga hirgeliyaa tahey lama deegaan aad u kulul oo dad iyo duunyoba ka caagan yihiin.
Wargeyska Africa Intelligence ayaa faaladiisa sii raaciyey in Madaxweneya Ismaaciil Cumer Geele oo aan ku kalsooneyn difaaca cidamadiisa Dawlada Ehtiopa u soo Dirtey hal guuto oo Jabuuti ka soo gashey Buuraleyda Aleyto-La Boyna oo u dhow xuduuda labada Qomiyadeed kala qeybisa.
Si kastaba ha ahaate xaalada nabad gelyo xumo ee ka jirta Waqooyiga Jabuuti, ayaa laga cabsi qabaa in ay ka sii darto marka la eego hadalada muran dhuleeka sii hurinaaya ee ka soo yeedhey Wasiirada Xukuumada Geele qaarkood, gaar ahaan Wasiirka Caafimaadka Jaamac Cilmi Cokiye oo Madaxweyne Geele sodog u yahey.
Xigasho: Gabileynews online
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png 0 0 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-08 17:56:302017-03-08 18:09:05Qaar ka mid ah war Baahinta reer Gabiley oo sumcadi Djibouti iyo tii seedigood ku ciyaaray
Saraakiil tababbar ku soo qaatay dalka Jabuuti oo Muqdisho lagu soo dhaweeyay... Daawasho Haboon Heeladi Heelo yar-yar ama Bogcad oo Djibouti,Sitti iyo Salal...